रोनाल्डोले ५० हेलिकोप्टर आउने मुल्यमा किनेको कार कस्तो छ ? – " सुलभ खबर "
रोनाल्डोले ५० हेलिकोप्टर आउने मुल्यमा किनेको कार कस्तो छ ?
काठमाडौं । मानिसको सम्पत्ति जति छ, त्यति नै उनीहरुको शोख पनि बढ्दै जान्छ । त्यसो त विश्वका धेरै खेलाडीहरुसँग महँगा कार छन् । तर, धेरैको मनमा उठ्ने गरेको प्रश्न संसारको सबैभन्दा महँगो कार कोसँग होला ?सञ्चारमाध्यममा बताइएअनुसार पोर्चुगलका फुटबर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले विश्वको सबैभन्दा महँगो कार बोइटुर नोइरे किने। बुगाटी कम्पनीले यो उत्पादन खरीद गर्ने मानिसको पहिचान भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
तर, समाचारमा बताइएअनुसार रोनाल्डोदे यो कार २०२१ मा मात्र पाउनेछन् । यसको केही हिस्सालाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेकोले उक्त समय लाग्नसक्ने देखिएको हो । यो कारको डिजाइन सन् १८३६ र १९३८ मा बनेको थियो । यो कार टाइप ५७ एससी एटलान्टिकको जस्तो मोडल रहेको छ ।
विश्वको सबैभन्दा महँगो कारमा ८ लिटर टर्बोचाज्र्ड–१६ इन्जिन छ । यसको रफ्तार प्रतिघण्टा २ सय ६० माइलको छ । अहिले रोनाल्डोसँग मर्सिडिज सी क्लास स्पोर्ट कूप, लेम्बर्गिनी एवेँटाडोर एलपी ७००–४ एस्टन मार्टिन, उन फरारी ५९९ जीटीओ, बेन्टले कान्टिनेन्टल जीटीसी स्पिड मेक्लोरेन एमपी ४१२ सी र रोल्स रोयस फेन्टम जस्ता कार छन् ।विश्वको सबैभन्दा महँगो कार बुगाटी ला बोइतूर नोइरेको मूल्य १ करोड १० लाख युरो तोकिएको छ । यो मूल्यमा ५० ओटा रोबिन्स आर–२२ हेलिकोप्टर खरीद गर्न सकिन्छ ।